Sahirana ny OSTIE Maro be ireo Orinasa tsy mahaloa ny latsakemboka intsony
Mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ny OSTIE (Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter Entreprises) amin’izao fotoana izao.
Betsaka ny Orinasa efa tsy mihodina intsony nohon’ny tsy fisian’ny akora fototra ka tsy afaka mandoa ny cotisation intsony. Kely ny vola miditra ary mety hisy ny fanapahan-kevitra raisina mifanaraka amin’izany raha mitohy ny olana. Anisan’izany ohatra ny fanajanonana ireo mpiasa mbola tsy raikitra (CDD) amin’ny volana May ho avy izao araka ny fampitam-baovao. Na izany aza dia mbola ho jerena ny fidiram-bola amin’ity volana ity andraisana fanapahan-kevitra sao tsy hahafeno ny karaman’ny mpiasa akory izany. Eo ihany koa ny fitadiavana vahaolana iarahana amin’ny governemanta. Andrasana ny tohin’ny raharaha .